Hay’adaha aan dowliga ahayn ee Soomaaliya oo eedeyn loo jeediyay | Baydhabo Online
Published On: Thu, Dec 15th, 2016
Hay’adaha aan dowliga ahayn ee Soomaaliya oo eedeyn loo jeediyay
Hay’ada Hufnaanta Caalamiga ah ee “Transparency International” ayaa soo saartay warbixin ay ugaga hadlaysa musuqmaasuq baahsan oo ka jira hay’adaha aan dowliga ahayn ee ka shaqeeya dalka Soomaaliya.
Warbixintan oo ka koobneyd 44 bog ayey Hey’ada Transparency International ku sheegtay in musuqmaasuq xoog leh uu ka jiro Hey’adaha aan dowliga aheyn ee ka howlgala Soomaaliya gaar ahaan, dhinacyada ku guuleysiga tartamada qandaraasyada, qandaasbixnta qaaska ah iyo qeybinta gargaarka bani’aadanimo.
Hey’ada waxay sheegtay in NGO-da ay iyaga qiimeeyaan howlaha qandaraasyada, taasoo qiimaha qandaraasyada gelisa sabeyn, waxaa kale oo ay ku eedeysay in qadaraasyada ay ku xiraan shuruudo.
Hey’ada Hufnaanta Caalamiga ayaa tilmaantay in hey’adaha maxaliga ah ay musuq maasuqaan dhanka shaqa qorista, sidoo kalana marka ay timaado mucaawino bixinta ay iyaga doortaan cida ay gargaarka gaarsiinayaan. Iyo sidoo kale dadka howlahooda kor kala socda.
Inkastoo ay jiraan cadeymo muujinaya musuq maasuqa xoogan ee ka jira hey’adaha dhexdooda, ayey warbixintu ogaatay in aysan jirin wada hadal ka dhaxeeya hey’adaha dhexdooda si wax looga qabto ama loo yareeyo musuqmaasuqa xirfadeysan.
Tusaalooyinka dhinaca musuq maasuqa ee hey’adu soo qaadatay ayaa waxaa ka mid ah in Hey’ad xarunteedu tahay magaalada Nairobi ay lacago laaluush ah weydiisatay nin madax ka ahaa hey’ad NGO ah oo rabay in hey’adiisu ay bah wadaag la noqoto Hey’ada kale.